Ho tonga goavan'ny finoana - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04 > Meteza ho goavan'ny finoana
Te ho olona manam-pinoana ve ianao? Te hanana finoana afaka mamindra tendrombohitra ve ianao? Te handray anjara amin'ny finoana afaka mamelona ny maty ve ianao, finoana toa an'i David afaka mamono olona goavambe? Mety misy goavambe marobe amin'ny fiainanao tianao potehina. Izany no zava-misy amin'ny ankamaroan'ny Kristiana, ao anatin'izany aho. Te ho tonga goavan'ny finoana ve ianao? Azonao atao, fa tsy vitanao samirery izany!
Matetika ny Kristiana izay mamaky ny toko faha-11 amin'ny Hebrio dia mihevitra fa hihevitra ny tenany ho tsara vintana izy ireo raha toa ka mifanitsy amin'ny iray amin'ireo olona ireo fotsiny avy amin'ny tantaran'ny Baiboly. Ho afa-po aminao Andriamanitra amin'izay. Ity fomba fijery ity dia vokatry ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny Kristiana dia mino fa ity andalana ity dia tokony hitarika antsika hitovy amin'izy ireo sy haka tahaka azy ireo. Saingy, tsy tanjon'izy ireo izany ary na ny Testamenta Taloha aza tsy mijoro amin'izany. Rehefa avy nitanisa ny lehilahy sy ny vehivavy voatonona ho solontenan'ny finoany dia nanohy ireto teny ireto ny mpanoratra: «Izany no antony mahatonga antsika koa, izay voahodidin'ny vavolombelona maro be toy izany, te-hanary ny enta-mavesatra rehetra sy ny ota izay mamandrika antsika . Izahay dia te-hihazakazaka amin'ny fikirizana amin'ny hazakazaka izay mbola miandry eo alohanay ary mijery an'i Jesosy izay mialoha ny finoantsika ka mahavita azy, amin'i Jesosy » (Heb. 12,1: 2 ZB). Voamarikao ve ireo teny ireo? Ireo olona goavam-pinoana ireo dia antsoina hoe vavolom-belona, ​​fa karazana vavolombelona inona izy ireo? Hitantsika ny valin'izany ao amin'ny tenin'i Jesosy, izay azontsika vakiana ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona: "Ny Raiko miasa mandraka androany, ary Izaho koa miasa" (Jaona 5,17). Nanamafy i Jesosy fa Andriamanitra no Rainy. "Izany no antony nitadiavan'ny Jiosy bebe kokoa hamonoana azy, satria tsy vitan'ny nandika ny Sabata fotsiny izy, fa nilaza koa fa Andriamanitra no Rainy ary nanao ny tenany hitovy amin'Andriamanitra" (Jaona 5,18). Rehefa tsapany fa tsy nino izy dia nilaza tamin'izy ireo izy fa manana vavolombelona efatra manaporofo fa Zanak'Andriamanitra izy.
Jesosy dia nanonona vavolombelona efatra
Niaiky i Jesosy fa ny fijoroany ho vavolombelona fotsiny dia tsy azo itokisana: "Raha ny tenako ihany no manambara, dia tsy marina ny fanambarako." (Jaona 5,31). Raha i Jesosy aza tsy afaka mijoro ho vavolombelona ny amin'ny tenany, iza no hahavita? Ahoana no ahafantarantsika fa milaza ny marina izy? Ahoana no ahafantarantsika fa izy no Mesia? Ahoana no ahafantarantsika fa amin'ny fiainany, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia afaka mitondra famonjena ho antsika izy? Lazainy amintsika izay hampiodina ny masontsika amin'ity lafiny ity. Tahaka ny mpampanoa lalàna iray izay miantso vavolombelona hanamarina fiampangana na fiampangana, dia notondroin'i Jesosy ho vavolom-belona ho azy i Joany Batista: «hafa ny mijoro ho vavolombelona manambara ahy; ary fantatro fa marina ny fanambarany ho ahy. Nandefa tany amin'i Johannes ianao dia nanambara ny marina » (Jaona 5,32-33). Nijoro ho vavolombelona tamin'i Jesosy izy ka nanao hoe: "Inty ny Zanak'ondrin'Andriamanitra, izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao!" (Jaona 1,29).
Ny fijoroana ho vavolombelona faharoa dia ny asa nataon'i Jesosy tamin'ny alàlan'ny Rainy: «Fa Izaho kosa manana fanambarana lehibe noho i Jaona; fa ny asa nomen'ny Ray ahy hovitaina, ireo asa ataoko ireo dia manambara amiko fa nirahin'ny Ray aho » (Jaona 5,36).
Na izany aza dia tsy nino ny fampianaran'i Jaona na Jesosy sy ny fahagagana nataony ny Jiosy sasany. Noho izany Jesosy dia nanonona vavolombelona fahatelo hoe: "Ny Ray Izay naniraka Ahy dia nanambara Ahy" (Jaona 5,37). Rehefa nataon'i Joany Batista Batisa tany Jesosy i Jesosy dia nataon'Andriamanitra hoe: Ity no Zanako malalako Izay sitrako. tokony henonao izany! » (Matio 17,5).
Ny sasany tamin'ireo mpihaino azy dia tsy tao amin'ny renirano tamin'io andro io ary noho izany dia tsy nandre ny tenin'Andriamanitra. Raha nihaino an'i Jesosy ianao tamin'io andro io, dia mety ho tsy nino ny fampianaran'i Jesosy sy ny fahagagana nataony ianao raha tsy nandre ny feon'Andriamanitra teo amoron'i Jordana ianao, nefa tsy ho afaka hiala tamin'ny vavolombelona farany ianao. Ary farany, natolotr'i Jesosy azy ireo ny fijoroana ho vavolombe- lona farany azon'izy ireo. Iza ity vavolombelona ity?
Henoy ny tenin'i Jesosy: "Mikaroka ny soratra masina ianao satria mihevitra fa manana fiainana mandrakizay ao aminy - ary izy ireo no mijoro ho vavolom-belona amiko" (Jaona 5,39 ZB). Eny, ny soratra masina dia mijoro ho vavolombelona momba an'i Jesosy. Iza amin'ireo andinin-teny ireo no resahintsika eto? Tamin'ny fotoana nilazan'i Jesosy ireo teny ireo dia ny Testamenta Taloha. Ahoana no nijoroan'izy ireo vavolombelona momba azy? Tsy voatonona mazava miharihary ao i Jesosy. Araka ny efa voalaza tery am-piandohana, ny zava-nitranga sy ny mpiady hevitra voalaza ao dia manambara azy ao amin'i John. Ianao no vavolom-pivavahany. Ny olona rehetra tao amin'ny Testamenta Taloha izay nandeha tamin'ny finoana dia aloky ny zavatra ho avy: "Izay aloky ny zavatra ho avy, fa ny tena dia an'i Kristy" (Kolosiana 2,17, Eberfeld Bible).
David sy Goliath
Inona no ifandraisan'izany rehetra izany aminao amin'ny maha-goavambe finoana ho avy anao? Tsara daholo! Andeha isika hitodika amin'ny tantaran'i David sy Goliath, ilay tantaran'ny zazalahy mpiandry ondry iray izay natanjaka tokoa tamin'ny finoana ka nahomby tamin'ny fitondrana goavambe iray tamin'ny tany tamin'ny vato tokana. (Boky 1 Samoela 17). Betsaka amintsika no mamaky ity tantara ity ary manontany tena hoe maninona isika no tsy mino an'i David. Mino izahay fa noraketina an-tsoratra izy ireo mba hampianarana antsika ny fomba hahatongavana toa an'i David, mba hahafahantsika hino an'Andriamanitra ihany koa ary handresy ireo goavambe eo amin'ny fiainantsika.
Amin'ity tantara ity anefa dia tsy solontenantsika manokana i David. Ka tsy tokony hifankahita amin'ny toerany isika. Amin'ny maha-vavahady ho avy azy dia nijoro ho vavolombelona tamin'i Jesosy izy tahaka ireo vavolombelona hafa voatonona ao amin'ny Taratasy ho an'ny Hebreo. Ny solontena ho antsika dia ny tafiky ny Isiraely, izay natahotra niala tany Goliata. Mamelà ahy hanazava ny fahitako an'io. Mpiandry ondry i David, fa ao amin'ny Salamo 23 kosa dia nanambara izy hoe: "Jehovah no Mpiandry ahy". Jesosy dia niresaka momba ny tenany: "Izaho no mpiandry tena tsara" (Jaona 10,11). David dia avy tany Betlehema, toerana nahaterahan'i Jesosy (1 Sam 17,12). David dia tokony handeha ho any an-tsahan'ady tamin'ny baikon'i Isai rainy (Andininy 20) ary nilaza i Jesosy fa ny rainy no naniraka azy.
Nanome toky i Saola Mpanjaka fa hanome ny zanany vavy ho an'ilay lehilahy afaka mamono an'i Goliata (1 Sam 17,25). Jesosy hanambady ny fiangonany rehefa tonga indray izy. Nandritra ny 40 andro dia naneso ny tafiky ny Isiraely i Goliata (Andininy 16) ary 40 andro koa dia nifady hanina Jesosy ary nalain'ny devoly fanahy fanahy tany an'efitra (Matio 4,1: 11). Nitodika tany amin'i Goliata i David tamin'ireto teny ireto: "Anio no hanoloran'ny Tompo anao ho amiko, dia hovonoiko ianao ka hokapohiko ny lohanao (Andininy 46 ZB).
Ho valin'izay, dia naminany tao amin'ny Genesisy i Jesosy fa hanorotoro ny lohan'ilay bibilava, dia ny devoly (Genesisy 1:3,15). Raha vantany vao maty i Goliata, dia nanafika ny Filistina ny tafiky ny Isiraely ary namono ny maro tamin'izy ireo. Nandresy anefa ny ady tamin'ny fahafatesan'i Goliat.
Manana finoana ve ianao?
Hoy i Jesosy: “Matahotra an'izao tontolo izao ianareo; fa matokia, efa nandresy an'izao tontolo izao aho » (Jaona 16,33). Ny marina dia tsy isika manana finoana hihaona amin'ilay goavambe no manohitra antsika, fa ny finoana an'i Jesosy. Manana finoana ho antsika Izy. Izy efa nandresy ny goavambe ho antsika. Anjarantsika ihany ny mandefa ny sisan'ny fahavalo. Tsy manam-pinoana samirery isika. Jesosy izany: "Tianay ny hibanjina Ilay mialoha ny finoantsika ka mahavita azy" (Heb. 12,2 ZB).
Toy izao no nilazan'i Paoly: "Fa tamin'ny lalàna, dia maty hamonjy ny lalàna aho mba ho velona ho an'Andriamanitra. Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho. Velona aho, fa tsy izaho izao, fa Kristy velona ato amiko. Fa izay ivelomako amin'ny nofo ankehitriny, dia velona amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatianina 2,19: 20).
Ka ahoana no hahatongavanao ho goavan'ny finoana? Amin'ny fiainana ao amin'i Kristy ary izy ao aminao: "Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin'ny Raiko ary ianareo ato amiko ary Izaho ao aminareo" (Jaona 14,20).
Ireo goavam-pinoana voatonona ao amin'ny Taratasy ho an'ny hebreo dia vavolom-belona sy mpanararaotra an'i Jesosy Kristy, izay nialoha ny finoantsika sy nahatonga azy io ho lavorary. Raha tsy misy an'i Kristy dia tsy afaka manao na inona na inona isika! Tsy i David no namono an'i Goliata. Jesosy Kristy mihitsy io! Isika olombelona dia tsy manam-pinoana hatramin'ny haben'ny voan-tsinapy afaka mamindra tendrombohitra. Rehefa nilaza i Jesosy hoe: "Raha manam-pinoana tahaka ny voan-tsinapy ianao dia hiteny amin'io hazo murbola io hoe: Esory ny ranomasina, ka miakara any anaty ranomasina, dia hankato anao izy (Lioka 17,6). Mampihomehy ny tiany holazaina: Tsy manam-pinoana mihitsy ianao!
Ry mpamaky malala, ny fihetsikao sy ny zava-bitanao dia tsy mahatonga anao hanana finoana goavambe. Tsy ho lasa iray ianao amin'ny fangatahana mafy amin'Andriamanitra mba hampitombo ny finoanao. Tsy hisy dikany aminao izany satria efa goavan'ny finoana an'i Kristy ianao ary amin'ny alalàn'ny finoany dia handresy ny zavatra rehetra ianao amin'ny alalany sy aminy! Efa nialoha azy sy nataony lafatra ny finoanao. Mahereza! Midina miaraka amin'ny goliath!